Xeer-ilaaliyaha guud ee dalka “Sanadkan si xooggan ayaanu ula dirirnay Musuq maasuqa. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Xeer-ilaaliyaha guud ee dalka “Sanadkan si xooggan ayaanu ula dirirnay Musuq maasuqa.
Xeer-ilaaliyaha guud ee dalka “Sanadkan si xooggan ayaanu ula dirirnay Musuq maasuqa.
Xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr Sulaymaan Maxamed Maxamuud, ayaa sheegay in Dowladdu ay sanadkan xoojisay la dagaallanka musuq-maasuq, taas oo kor u qaadday sumacada Dalka.
Dr. Sulaymaan Maxamed ayaa tilmaamay inaysan sax ahayn in Soomaaliya sanad kasta ay kaalinta koowaad uga jirto waddamada ugu musuqa badan Adduunka, xeer-ilaaliyaha ayaa sidoo kale sheegay in sanadkan ay sameeyeen bahda Caddaaladda la dagaalankii ugu xoogga badnaa ee dhinaca musaqa ah.
Previous articleWebiga Shabeelle oo ku fatahay magaalada Baladweyne.
Next articleDowladda UK oo Soomaaliya ugu deeqday Gaadiid Ciidan+Sawirro.